Beesha Caalamka oo ka xumaatay heshiiskii Muqdisho – Puntland Post
Posted on September 21, 2020 September 21, 2020 by Liban Yusuf
Saaxiibada Soomaaliya ee Beesha Caalamka ayaa markii uhu horreysay ka hadashay heshiiskii hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ee dhawaan lagu gaaray Muqdisho.
War-saxaafadeed ay wadajir ah u soo saareen Belgium, Denmark, Itoobiya, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Japan, Jarmalka, Urur-Goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Netherlands, Norway, Suudaan, Sweden, Turkey, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, Dowladda Mareykanka, iyo Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in heshiiskaasi ahaa mid ay gaartay cid gaar ah oo aan loo dhammeyn, hannaanka lagu heshiiyay aan faahfaafin dheeriya laga bixin oo uusan caddeyn.
Sidoo kale Beesha Caalamku waxay tilmaantay in hanaanka doorasho ee la shaaciyay uu ka hooseeyo yoolkii Soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayay ee ahaa cod-bixin toos ah oo lagu soo doorto xubnaha baarlamaanka.
Beeaha Caalamka waxay ku baaqday in geedi-socodka doorasho ee 2020/21 uu noqoto mid xor ah, xalaal ah, daah-furan oo loo dhan yahay.
Hadalka Beesha Caalamla ayaa ku soo aadaya, iyadoo maalmaha soo socda la filayo in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo heshiiska hannaanka doorasho ee ay ku heshiiyeen madaxweyne Farmaajo, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Muqdisho – Saaxiibada beesha caalamka waxay garwaaqsanyihiin heshiiskii ay ku dhawaaqeen Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo shanta Madaxweyne Dowlad Goboleed ee Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah (DGXF), heshiiskaas oo la xiriira geedi-socodka doorashooyinka 2020/21.
* Belgium, Denmark, Itoobiya, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Japan, Jarmalka, Urur-Goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Netherlands, Norway, Suudaan, Sweden, Turkey, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, Dowladda Mareykanka, iyo Qaramada Midoobay”.